Mustaqbalka Utopia ee Iibinta Kanaalka | Martech Zone
Wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo kuwa iibiya Qiimaha (VARs) waa ilmo-dhaleen madax-cas ah (oo aan loola dhaqmin iyada oo aan loo eegin madax-bannaanida) markay tahay helitaanka dareenka iyo ilaha ka imanaya soo-saareyaasha alaabada aan tirada lahayn ee ay iibiyaan. Iyagu waa kuwa ugu dambeeya ee hela tababarka iyo kuwa ugu horreeya ee lagula xisaabtamo inay la kulmaan kootadooda. Iyada oo miisaaniyada suuqgeynta xadidan, iyo aaladaha iibka ee duugoobay, waxay la halgamayaan inay si wax ku ool ah ula xiriiraan sababta ay alaabtu u tahay mid gaar ah oo ka duwan.
Waa maxay Iibka Channel? Qaabka wax loo qaybiyo ee ay adeegsato meherad si ay u iibiso wax soo saarkiisa, badiyaa iyada oo loo qaybiyo xooggeeda iibka kooxo diiradda saaraya marinnada iibka ee kala duwan. Tusaale ahaan, shirkad ayaa laga yaabaa inay hirgeliso istiraatiijiyad iibinta kanaalka si ay ugu iibiso wax soo saarkooda iyadoo loo marayo xoogga iibka guryaha, ganacsatada, tafaariiqda ama suuqgeynta tooska ah. Qaamuuska Ganacsiga.
Sannadihii ugu dambeeyay waxaan aragnay kororka qarxa ee waaxda tikniyoolajiyadda suuqgeynta, taasoo sababeysa shirkad cilmi baaris Gartner si caan ah loo saadaaliyo taas CMOs waxay ka sii dheereyn doonaan CIO-yada IT-ga sanadka 2017. Tani waxay igu hogaamineysaa inaan la yaabo sida, ama haddii, OEMs ay u hagaajin doonaan istiraatiijiyadooda suuq geynta, iyo tan ka sii muhiimsan, ma jiri doonaan diirad cusub oo ku saabsan qalabka kaalmaynta iibka kuwaas oo si weyn u saameyn kara koritaanka iyo guusha iibka kanaalka?
Iyada oo tikniyoolajiyad cusub ay si dhaqso leh u beddeleyso muuqaalka suuqgeynta iyo dhiirrigelinta iibka waxaan qiyaasayaa mustaqbalka iibinta kanaalka in ay yareyn doonto qaar ka mid ah caqabadaha wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo VAR-yada hadda wajahaya:
Tababarka - Daraasad dhowaan la sameeyay Qvidian muujinaysaa inay tahay celcelis ahaan waxay qaadataa 9 bilood in si guul leh loogu tababaro wakiilka Iibka, mararka qaarkoodna waxay ku qaadan kartaa ilaa hal sano inay si buuxda waxtar u yeeshaan. In kasta oo celceliska wakiilka laga yaabo inuu mas'uul ka yahay iibinta hal shey oo gaar ah, ama khad wax soo saar, VARs ayaa loo xilsaaray inay ka iibiyaan alaabooyin badan shirkado kala duwan. Haddii tirakoobkani run yahay wakiilada iibka tooska ah, mid ayaa kaliya u qaadan kara in wadaha kanaalka loo xilsaaray barashada xargaha wax soo saar aad u ballaaran oo laga soo saaray in ka badan hal soo saare ay qaadan karto waqti aad u dheer in la tababaro.
La'aanta Hawlgelinta Qalabka Iibka - 40% dhammaan agabyada suuqgeynta uma isticmaalaan kooxaha iibka, taas oo macno samaynaysa markaad tixgeliso in badanaa qalabkani ay yihiin qoraallo xajmi ah iyo dammaanad, fiidiyowyo qulqulaya, ama bandhigyo PowerPoint oo isku dheelitiran oo aan run ahaantii gacan ka geysaneynin abuuritaanka geeddi-socodka iibka. Maaddaama iibsadayaasha hadda ay raadinayaan xakameyn aad iyo aad u badan, wada-hawlgalayaasha kanaalka waa inay awood u yeeshaan inay bixiyaan khibrad is-dhexgal ah oo soo jiidasho leh, iyo wax soo saar kasta iyo xalal ay iibiyaan. Marka la iibinayo alaabada shirkado kala duwan oo si toos ah u tartamaya midkoodba midka kale, waxay u badan tahay in wada-hawlgalayaasha kanaalka ay waqtigooda ku qaadan doonaan iskuday ay ku iibinayaan alaabooyinka ay ugu sahlan tahay inay ku kala soocaan – sidaas darteedna ay heshiisyo ugu xirmaan. Soo-saareyaasha alaabtu way garteen tan, waxayna durbaba u jeesteen qaabab wax soo saar leh oo 3D ah, kuwaas oo u muuqda una dhaqmaya sida badeecada dhabta ah, si ay hadiyadohooda ugu helaan kooxaha iibka iyo la-hawlgalayaasha kanaalka. Si kastaba ha noqotee, wada-hawlgalayaasha kanaalku badanaa waa kuwa ugu dambeeya ee hela qalabkan is-dhexgalka ah ee kaabaya iibka sababtoo ah ajuurada ruqsadda sare ee software-ka, haddii ay helaan qalab is-dhexgal gabi ahaanba, iyaga oo uga tagaya khasaaro weyn.
caalamiyeynta - VAR-yada iyo la-hawlgalayaasha kanaalka ayaa badiyaa ku yaal daafaha adduunka, oo laga yaabo inay aad uga fog yihiin goobta soo-saaraha ugu dhow ama xarumaha bandhigyada alaabada. Sidaa darteed, waxay u baahan yihiin qalab u oggolaanaya iyaga inay si fiican ugu iibiyaan goob kasta, waqti kasta. In kasta oo codsiyada moobiilku ay bilaabayaan inay yareeyaan dhibaatadan, kumbuyuutarro badan / taleefannada gacanta waxay wataan culaysyo badan oo caan ka ah dalal kala duwan, taas oo ka dhigaysa keenista nuxurka mid dhib badan, maaddaama aaladda wax iibinta ay tahay inay awood u yeelato inay ku shaqeyso qalab kasta oo kanaalada wadaageyaashu leeyihiin. Caqabadaha luuqadda ayaa sidoo kale ka dhigaya aalado badan oo iib ah kuwo aan waxtar lahayn, haddii aan loo tarjumin luqadda maxalliga ah si loogu isticmaalo dalal shisheeye.
Gaaritaanka Universal - Sidaan hore u soo sheegnay, wakiilada adduunka ku kala firidhsan waxay adeegsadaan aalado badan oo kala duwan, laga bilaabo laptop-yada ilaa aaladaha mobilada, waxayna u baahan yihiin qalab si aan kala sooc lahayn u shaqeeya - oo bixiya khibrad caalami ah iyadoo aan loo eegin goobta. Sida laga soo xigtay Qvidian, sababta ugu horreysa ee iibku u ixtiraamo agabyada suuqgeynta ayaa ah iyaga oo aan awoodin inay helaan ama helaan. Tani waxay ka dhigan tahay helitaanka macluumaadka saxda ah ee la galiyay wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo VAR-yada qalabka saxda ah ayaa ah muhiimadda ugu weyn si aan farriintaada ugu gudbinno si habsami leh oo joogto ah. Si loogu isticmaalo gobolada ay adagtahay in la helo qadka internetka, ama loo isticmaalo goobaha sida xarumaha shirkadaha ama isbitaalada meelaha intarnetka inta badan la xaddido, wada-hawlgalayaasha kanaalka waxay u baahan yihiin codsi ka shaqeeya labada qadka iyo khadka tooska ah, kumbuyuutarrada gacanta, taleefannada casriga ah, iyo kiniiniyada. Badanaa, noocyadan codsiyada ah waxay u baahan yihiin rukhsad (iyada oo ku saleysan tirada dadka isticmaala), taas oo ka dhigeysa wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo VAR-yada khasaaro weyn, maaddaama qaar badan oo OEMs ah ay ka warwareegayaan inay soo qaadaan tabka loogu talagalay wada-hawlgalayaasha qalabka wax-iibinta ee awooda ama ma isticmaali karaan run ahaantii .
Qiyaas Mustaqbalka Utopia ee Iibinta Kanaalka
Qalabka awoodsiinta iibinta ee loo sameeyay gaar ahaan kanaalada ma bixin doono oo keliya 100% marin u helka alaabada is-dhexgalka, (iyaga oo si muuqata u muujinaya) laakiin waxay sidoo kale muujineysaa sida badeecadaha kala duwan ay u wada shaqeyn karaan si ay si wanaagsan ugu xalliyaan caqabadaha ganacsi ee macaamiisha, iyadoon loo eegin shirkadda ay soo saareyso. Tani waxay u rogi doontaa lamaane kasta inuu noqdo khabiir wax soo saar, maadaama ay lahaan lahaayeen bandhigyo badeecadeed oo khuseeya, qalab taageeraya, iyo farriimo suuqgeyn ah oo ay ku kaydinayaan isla markiiba ogeysiis. Ugu dambeyntiina, wada-hawlgalayaasha kanaalka ayaa awoodi doona inay dhexgalaan dhammaan mudaharaadyada wax soo saarka ee 3D-ka ah, iyadoon loo eegin OEM, hal qalab oo wax-ku-ool ah oo iibsi wax ku ool ah oo leh astaamo u gaar ah, iyaga oo u oggolaanaya inay muujiyaan waxa ugu fiican xal loogu talagalay macaamiisha iyagoo mideynaya dalabyo kala duwan oo ka socda lamaanayaashooda.
Kaliya maahan in qalabka ku habboon uu marin u heli karo dhammaan khadadka wax soo saarka, laakiin isticmaalayaasha aan xadidneyn waxay marin u heli doonaan 24/7, khadka tooska ah ama khadka tooska ah, meel kasta oo adduunka ah-oo laga helo khibrad caalami ah iyadoo aan loo eegin goobta ama barxadda. Qoraalka si fudud loo turjumi karo wuxuu ka dhigayaa abuurista noocyada caalamiga ah ee arjiga mid deg deg ah, iyo iswaafajinta aaladda iskutallaabta guud waxay u weecineysaa qalab kasta oo wada-hawlgalayaashu 'leeyihiin inay noqdaan dardar-soojiye iibiyaha soo jiidasho leh.
In kasta oo tani ay umuuqato riyo, waxaan aaminsanahay mustaqbalka is-dhexgal, qalab iskutallaab ah oo sidan oo kale ah wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo VAR-yada laga yaabo inaysan aad uga fogaan!
Tags: la-hawlgalayaasha kanaalkaiibinta kanaalkatababarka iibinta kanaalkahawlgelintagartnercaalamiyeyntawada shaqeynOEMqodiyaaniibiyayaalKordhinta Iibkamarin guudiibiyeyaasha qiimaha ahwaxaa jiraha
Dana Drissel waa hal-abuure istiraatiiji suuq-geyn ku takhasusay barnaamijyada ololaha wada ee soo jiita, xajiya, kuna kobciya rajada iyada oo loo marayo dhuumaha iibka. Xilligan Agaasimaha Sare ee Suuqgeynta ee Kaon Isdhexgal, waxay qeexday astaanta shirkadaha, waxay gaarsiisay cabbirada hadafka ROI-ku saleysan, waxayna soo bandhigtay tiro aad u badan oo ah xalalka Kaon, iyadoo dhiseysa saldhig deg deg ah oo sii kordhaya ee macaamiisha hogaamineysa warshadaha qeybaha kala duwan ee ganacsiga.
4 Waxyaabaha Muhiimka u ah ee Istaraatiijiyada Suuq-geynta Moobaylka